Somalia oo ku guuleysatay Koob Dahab ah!!!=Faallo
Friday June 28, 2019 - 20:27:10 in Wararka by Mogadishu Times
Dhaliishaada oo aad ogaato Ceeb ma ahan, haddii aad u qaadato Cashar si aad u xaliso. Aduunka waxaa lagu tartamaa waxyaaba badan, Kubadaha Cagta, Gacanta, dabaasha, heerka wax Soo Saarka, Aqoonta, tartamo Quraxda, Musiga, iyo kuwa kale. Annaga xatta
Dhaliishaada oo aad ogaato Ceeb ma ahan, haddii aad u qaadato Cashar si aad u xaliso. Aduunka waxaa lagu tartamaa waxyaaba badan, Kubadaha Cagta, Gacanta, dabaasha, heerka wax Soo Saarka, Aqoonta, tartamo Quraxda, Musiga, iyo kuwa kale. Annaga xatta Koobka foolxumida waa nalaga qaaday. Waa in aan Hal Koob Ku guuleysanaa. Ugu Dambeeyn Caalamka oo dhan waxaan Ka qaadanay, waxaana helnay Koobka Dahabka ah ee Musuqmaasuqa. War bixintii ugu dambeysay we Heyadda Caalamiga ah ee la socodka Musuqa " Global Corruption Watchdog" ayaa Soo saartay warbixinteeda. Denmark ayaa Noqotay wadanka ugu horeeya ee Musuqa Ka badbaaday 88/100 Aduunka oo dhan. Kan Ku guuleysay in uu Caalamka Ku hogaamiyo Musuqa ayaa Noqday Somalia oo heshay 90/100 dhibcood Musuqa, waxaa Ka maqan 10/100 oo kaliya. (F.S: 1aad)